Global Voices teny Malagasy » Milaza ny Mpampianatra Lalàna Fa Fanitsakitsahana Ny Zon’Olombelona Ny Tsy Fahombiazan’ny Fanabeazana Ao Trinidad sy Tobago · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Desambra 2016 15:23 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fanabeazana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Sary: dcJohn / Flickr / CC 2.0
Mirehareha amin'ny fananany fampianarana maimaimpoana ho an'ny vahoakany i Trinidad sy Tobago, na eo aza ny fahombiazan'ny fepetra amin'ny fanaovana fanadinana fidirana amin'ny sekoly amin'ny ambaratonga faharoa izay nyo vokany dia zaza vao 11 taona no mifaninana ho amin'ireo toerana voafetra any amin'ireo sekolim-panjakana ampy fitaovana tsara indrindra, fantatra toy ny sekoly ”manadaza”.
Ny tena marina dia tsy maimaimpoana mihitsy ny fampianarana ao Trinidad sy Tobago (na misy famatsiana aza, mbola misy sanda miraikitra ) no sady tsy ho an'ny rehetra (maro amin'ireo sekolim-panjakana no tena tsy ampy fitaovana ary tsy ampy mpiasa). Ankehitriny, mpampianatra iray, Profesora Rose-Marie Belle Antoine, mpiandraikitra ao amin'ny Oniversiten'ny Lalàna any Antilles, no miantso ny firenena mba handray ny andraikiny.
Ao amina lahatsoratra vahiny ao amin'ny tranonkalam-baovao tsy mahay mipetraka Wired868, nilaza i Belle Antoine fa ny zavatra toy ny fanabeazana sy ny fahasalamana dia zon'olombelona, ”zo, fa tsy tombontsoa, na taratasy omena”.
Nitandrina ihany koa i Antoine tamin'ny fanavahana ny fanjakana sy ny firenena, izay antsoiny hoe ”hevitra maty izay mandeha mihoatra ny fitondram-panjakana manokana sy ny fe-potoana politika”:
Efa ela ny Zon'olombelona no nandika ny fetra hoe ny resaka zo dia tsy mikasika afa-tsy ny antsointsika hoe zo sivily sy politika—izany hoe, zo hiaina, haneho hevitra, hihetsika, sns. Mifanohitra amin'izany, ny dikany vaovao ahafantarana ny zo dia idiran'ny antsointsika hoe zo ara-toekarena, sosialy ary kolotsaina ihany koa; izany hoe, ny zo hahazo fanabeazana, fahasalamana, asa, tontolo iainana ary ny kolotsaina.
Marihina fa efa nihataka tamin'ny fetra napetratsika isika, izay nilaza hoe ny zo ara-toekarena, sosialy ary kolotsaina dia tsangan-kevitra tsy azo ampiharina. Mifanohitra amin'izany anefa fa ny fiarahamonina iraisam-pirenena dia manaiky ankehitriny fa zava-dehibe iainkinan'ny aina fotsiny ireny zo toy ny karazana mofo sy dibera ireny, ary amin'ny lafiny sasany tena manandanja mivantana kokoa, ho amin'ny fahamendrehana sy fitovian-jon'ny olombelona.
Koa noho izany, natao sonia ary naroso ireo fivoriambe iraisam-pirenena sy ireo fitànana an-tsoratra mba hiantohana ny fananan'izy ireny heviny mivaingana sady azo tsapain-tanana. Rehefa nodinihana, ny dikan'io dia efa manana adidy ara-dalàna mivantana ireo Firenena mba hampiroborobo sy hiaro ny zo toy izany.
Raha miresaka momba ny Fitànana an-tsoratra tao San Salvador 1999, izay nanondrotra ny tsivalankazo ho an'ny zon'olombelona amin'ny fiarovana ny fahalalahana ara-toe-karena, sosialy ary kolotsaina, nilaza i Antoine, ”raha fintinina dia tsy afaka intsony isika ny hanakimpy maso eo amin'ny adidin'ny Firenena mba hampiroboroboana, hanome ary hiaro ny zo amin'ny fianarana, fahasalamana, asa, kolotsaina ary amin'ny tontolo iainana. Indrindra, miantso ny Firenena mba ‘ho tonga saina tsikelikely’ amin'ireo zo ireo ity fanapahankevitra ivelan'ny lalàna (jurisprudence) ity. Ny dikan'io ihany koa dia tsy afaka ny hihemotra ny Fanjakana iray na hisintona ny didy navoakany ”.
Ny fomba fijeriny — tohanan'ny ohatra momba ny tsy fahampian-karama sy ny fepetra ratsy iasana, ary ny fandàvana vao haingana avy amin'ny governemanta ny fidirana  amin'ny fampianarana ambony iantohan'ny fanjakana ho an'ny olona mihoatra ny 50 taona — dia nihemotra i Trinidad sy Tobago.
Raha miresaka momba ny tantara tamin'ny vaovao  izay ahitana ray aman-dreny mangataka ny fidiran'ny fanjakana an-tsehatra amin'ny fanatsarana ny sekoly ambaratonga voalohany iray, namintina i Belle Antoine:
Tena lasa [tsy] mahatsiaro ny fijaliana intsony isika, lasa tsy mahatsapa tena ary tsy matoky momba ny toerantsika eto an-tany, hany ka tamin'ny alina nandefasana ilay tantara ahitana ireo ray aman-dreny mandohalika, ny olan'ireo olona notsapaina hevitra dia nisy ‘antony politika’ izany.
Amim-panontaniana tena raha ny foko misy ireo mpanohitra dia mety misy hidirany amin'ny fomba nametrahan'ny haino aman-jery eo an-toerana ny fanontaniana, dia nanampy izy:
Tsy tokony hampisy fahasamihafana eo amin'ny zonao sy ny zo amin'ny maha-olom-pirenena anao ato anatin'ity firenena izay lazaintsika ho tiana atsangana ity ny foko ny ny fiaviana.
Matetika tsy tafiditra anaty kajikajin'ny fandraisana ny mpianatra ho amina sekoly ambaratonga faharoa mahatsiriritra ao Trinidad sy Tobago ny foko, izay — tsy ijerena ny fari-pananany — ny mponina dia natao mba ho afaka mahazo fanabeazana. Raha ny marina, hoy i Patrice Cox-Neaves, mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Antilles Andrefana, tokana ny hevitra voalohany niaingàna mikasika ny fampianarana ho an'ny rehetra, izay ny zaza no ivony, tohanan'ny ministeran'ny fanabeazana, sampandraharaha ao an-tsekoly sy ireo mpampianatra amin'ny lafiny iray, ary ireo ray aman-dreny amin'ny lafiny iray hafa. Zava-dehibe toy izany koa, satria ny sekoly manerana ny firenena dia samy tokony ho eo ambony fitsipika iray mitovy, dia tokony handeha an-tsekoly ao amin'ny faritra misy azy ny ankizy. ”Ny hevitra dia tokony afaka hiatrika ny olona rehetra,” manazava izy. ”Resaka tsy fitongilànana izany.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/10/92880/
 sanda miraikitra: http://www.guardian.co.tt/news/2016-08-20/high-cost-%E2%80%98free%E2%80%99-education
 nilaza : http://wired868.com/2016/11/28/is-tts-failure-to-provide-proper-school-facilities-for-all-a-human-rights-violation/
 Fitànana an-tsoratra tao San Salvador : https://en.wikipedia.org/wiki/American_Convention_on_Human_Rights
 fandàvana vao haingana avy amin'ny governemanta ny fidirana: https://globalvoices.org/2016/07/21/will-trinidad-tobago-students-be-last-out-of-the-gate-if-the-government-stops-funding-tertiary-education/
 tantara tamin'ny vaovao: http://www.guardian.co.tt/news/2016-09-13/parents-protest-over-%E2%80%98horror-school%E2%80%99